Inani lephrinta ye-Ceramic Tile China Manufacturer
Incazelo:I-Ceramic Tile Printer Suppliers,I-Ceramic Tile Printing Equipment,I-Digital Ceramic Printer Thenga
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yeCeramic > Inani lephrinta ye-Ceramic Tile
Ngokuthandwa kweCeramic Tile Printer Price egcwele ubuntu, ehlakaniphile nokudala, izitini zodonga olubandayo, ifenisha elihle kakhulu futhi isikhala ukungabi khona kwamakha evamile kushintshwe okuningi.
Lesi sithombe esenziwe nge-ceramic decoration sishiye ukungafani nokuthinta ukuhlobisa kwangaphambili, ukuma komhlaba kufakwe efrijini odongeni, iphunga lemvelo kanye nesimo samandla.
Ngisho noma ukudweba ezindongeni ezivamile kunazo zonke, umdali unemizwelo ehlukahlukene futhi ugqozi, isitayela sizohluka.
I-Ceramic Tile Printer Ihlinzeka uhlobo lwemishini ye-digital ye-"non-contact" ye-jet uhlobo lwe-digital, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze- Ceramic Tile Printing Equipment RF-A3UV:
2. Ukuphrinta bobumba ku-Glass kungaba efakwe nge Ukuphakama ngokuzenzakalela Inzwa, ukuvikela ukuphrinta ikhanda;
3. I- Digital Ceramic Printer Thenga I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Ukuthengisa okushisayo kakhulu i-A3 Ceramic Printer Xhumana Nanje
Iphrinta yeCeramic yokudayiswa Xhumana Nanje
Umshini wephrinta ye-A3 yeCeramic Xhumana Nanje
I-Ceramic Tile Printer Suppliers I-Ceramic Tile Printing Equipment I-Digital Ceramic Printer Thenga I-Ceramic Printer Paper I-Ceramic Printer Diy I-Ceramic Digital Printer I-Ceramic Printer Uk I-Tile Printer Online